Madaxweyne Farmaajo oo kormeerey xarunta ciidanka qeybta 21 aad ee dhuusamareeb | Somali National Television - sntv.so
Home BENAADIR Madaxweyne Farmaajo oo kormeerey xarunta ciidanka qeybta 21 aad ee dhuusamareeb
Madaxweyne Farmaajo oo kormeerey xarunta ciidanka qeybta 21 aad ee dhuusamareeb
Madaxweynaha Jamhuuriyaddda Soomaaliya Mudane Maxamed C/llaahi Farmaajo ayaa maanta booqday Xerada taliska qeybta 21-aad ee Ciidanka Xoogga Dalka ee ku taala magaalada Dhuuso Mareeb,isagoo halkaasi kula kulmay saraakiil iyo ciidamo.
Wuxuu warbixin ka dhageystay saraakiisha qeybta 21-aad ee Ciidanka Xooga Dalka,kuwaasi oo ka warbixiyay baahiyaha ay ciidamadu qabaan iyo sida ay ugu diyaar san yihiin gulufka ka dhanka ah ALshabaab.
Madaxweynaha Soomaaliya oo ay wehliyaan madaxda Galmudug,mas’uuliyiin iyo saraakiil kale ayaa ammaan iyo gobaadin ujeediyay ciidamo halkaasi ku sugan iyo saraakiishooda,wuxuuna sheegay in ay kaalin mug leh ay ku leeyihiin dagaalka ka dhanka ah Alshabaab.
Madaxweynaha Soomaaliya iyo wafdi ballaaran oo uu hoggaaminayo ayaa la filayaa in ay ka qeybgalaan shirka lagu dhameystirayo heshiiskii Ahlusuna iyo Galmudug,kaasi oo ka furmaya magaalada Dhuusamareeb.
Previous articleWasiirka Amniga oo booqdey degmada Balcad
Next articleWafuud ka socta beesha caalamka oo gaarey magallada dhuusamareeb